IAtabular Alumina, Alumina Brick, Alumina Plate - Almelt
Iimveliso eziphambili zibandakanya iibhola ze-alumina zokugaya, ukucoca okuphezulu kwe-alumina iibhola zokufaka i-inert, i-linam ye-ceramic liners, i-linings, i-alumina e-resistant-ceramic tubes, i-honeycomb ceramics kunye neendawo ezikhethekileyo zokuthintela.
Ipleyiti yokuCoca i-Foam yodongwe
Ukucoceka okuphezulu kwebhola
Alumina Nethemba Brick
Ukunxiba iithayile zemibala kaMoses
ulwelo aluminiyamu ibhegi ukuhanjiswa combo gla ...
I-alumina ibhola yokucoca umatshini wokutshisa ubushushu ba ...
Ingcali ethembekileyo kushishino iimveliso alumina
Qingdao Almelt yodongwe Co., Ltd lisebe HK Almelt Co., Ltd, nto leyo ibekwe e Qingdao yophuhliso Zone, kwiPhondo Shandong. Lishishini elibanzi kunye neebhola ze-alumina, iibhola zokugcwalisa, izitena ezinxibayo ezinamathela, i-zirconium-aluminium yodongwe edityanisiweyo kunye nezinye iimveliso njengeyona nto iphambili, ukudibanisa uyilo lwemveliso, i-R & D kunye nentengiso.
IAlmelt iyasebenza kwimveliso yealuminium yodongwe kwaye inamava okuthumela ngaphandle eJamani, Australia, United States, India, Brazil, South Africa, mpuma Asia kunye nakwezinye iindawo.
Umgangatho ongcono weNkonzo
Disemba-07-2020 I-Fralco epheleleyo-oluzenzekelayo ngumgubo wokutshiza ilori yokulungisa yafakwa eNeimenggu
Nov-11-2020 Isicelo se-alumina ibhola desiccant kunye nokuchazwa kwebhola yealumine
Nov-11-2020 Uphi ibhola yeAlumina esetyenziswa ikakhulu?
Nov-11-2020 Zeziphi izinto ezichaphazela iibhola zealumum?
Qingdao Almelt yodongwe Co., Ltd lisebe HK Almelt Co., Ltd, nto leyo ibekwe e Qingdao yophuhliso Zone, kwiPhondo Shandong. Lishishini elibanzi kunye neebhola ze-alumina, iibhola zokugcwalisa, izitena ezinxibayo ezinamathela, i-zirconium-aluminium yodongwe edityanisiweyo kunye nezinye iimveliso njengeyona nto iphambili, ukudibanisa uyilo lwemveliso, i-R & D kunye nentengiso. Ezona mveliso ziphambili zibandakanya iibhola ze-alumina zokugaya, iibhola ze-alumina zokufaka izinto ezihlambulukileyo, i-liner ye-ceramic liners, i-linings, i-alumina wear-resistant ceramic tubes, i-honeycomb ceramics kunye neendawo ezikhethekileyo zokuthintela.